Akhriso:- Siyaasi Juxa oo kabaha la dulmaray wasiir Goodax “Puntland waa pre-federal state dhisan in kabadan 20 sano oo leh manhaj”.
April 18, 2019 Xafiiska Puntland Faallooyinka, Puntland, Somalia, Wararka Maanta 1
Wasiirkii hore ee arrimaha gudaha dowladda Federaalka Cabdi Faarax Siciid ( Juxa) ayaa ugu baaqay wasiirka waxbarshada ee dowladda Federaalka Cabdullaahi Goodax Barre inuu faraha kala baxo waxbarshada Puntland.
Siyaasi Juxa oo ahaa asaasihii Manhajka iyo Imtixinaadka Shahaadiga ah xiligii uu ahaa wasiirka waxbarashada Puntland 15 sanno k ahor ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa facebooga, waxaa uu ku sheegay in Puntland ay ka horaysay dowladda Federaalka, ayna leedahay Manhajd, imtixaan iyo siyaasad waxbarasho oo dhisan 20 sanno
“Wasiir Godaxow, Puntland waa pre-federal state dhisan in kabadan 20 sano oo leh manhaj, imtixaan iyo siyaasad waxbarasho oo dhisan waqti dheer. Waa nidaam waxbarasho oo leh sharciyad iyo kalsooni shacab oo buuxda. Waa nasiib darro inaad maanta ku goodido inaad burburiso nidaamkaas reer Puntland dhisteen”
Siyaasi Juxa, waxa uu sheegay in adeega waxbarashadu uu yahay shaqo u gaar ah dowlad goboleedyada xubnaha ka aha dowladda Federaalka oo ayan khusayn dowladda dhexe ee Muqdisho.
“Tan kale waxbarashadu waa shaqo u gaar ah Dawlad-goboleedyada ee maaha wax quseeya Dawlad dhexe. Nidaamka Federalka waxaa loo samaystay inaan arrimahan oo kale mardame meelna marti looga noqon” ayuu yiri Wasiir Juxa
Wasiirka waxbarashada Federaalka Cabdullaahi Goodax Bare oo Telefishanka Federaalka ka hadlay ayaa sheegay in dowladda Puntland ay ka baaqsatay inay ka qaybgasho Imtixaanaadka Shahaadiga oo 11 bisha May la qaban doono. Wasiirku wuxuu toos ula hadlay waalidiinta iyo ardayda reer Puntland, isagoo sheegay in fursadaha wasaarada ayan u sinaan doonin ardayga u fariista imtixaanaadka wasaaradiisa iyo midka aan u fariisan.
Waa wax aan xishooneyn siyaasiinta xanaaqsan Ha moodin inaad miciyo libaax leedahay